Izimvo zokuphinda usebenziseke: ezona mbono zilungileyo zokuvuselela ekhaya | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
IsiJamani sasePortillo | 04/05/2022 12:00 | Ukusetyenziswa kwakhona
Ngokuphinda sisebenzise izinto zemihla ngemihla, ukongeza ekongeni imali kunye nokunika uchuku lwantlandlolo nolwalomntu kumakhaya ethu, sinokuyinciphisa inkunkuma kwaye sibe nentlonipho ngakumbi kokusingqongileyo. Kukho kakhulu imibono yokuphinda isetyenziswe ekhaya kunye nokukwazi ukunika ubomi besibini kwinto engasasebenziyo njengoko imiselwe ukuba ibe yinkcitho.
Kweli nqaku siza kukunika ezona ngcinga zilungileyo zokusebenzisa kwakhona ekhaya.
1 Ukubaluleka kokurisayikilishwa ekhaya
2 Izimvo zokurisayikilisha
2.1 Ibhotile yeplastiki njengembiza yeentyatyambo
2.2 Isikhongozeli sepasta kunye nemifuno
2.3 ivasi enebhotile
2.4 Ikomityi yeglasi yeyogathi njengesiphatho sekhandlela
2.5 Sebenzisa kwakhona ibhaluni ethotyiweyo
2.6 Isacholo seBhotile yePlastiki
2.7 Isibane ngecephe leplastiki
2.8 Umququzeleli ngeetyhubhu zekhadibhodi
2.9 isakhelo sefoto ngejagi
2.10 Isilwanyana esinesoda cap
2.11 Ithala leencwadi
2.12 Ikhandlela lokuhombisa elinesivalo
2.13 IHanger enezixhobo ezindala
2.14 Isibane esinebhalbhu endala
2.15 Iibhokisi zobucwebe ezineebhotile zeplastiki
Ukubaluleka kokurisayikilishwa ekhaya
Umkhwa wokurisayikilisha ubaluleke kakhulu kwiminyaka yakutshanje. Oku kungqineke kuyeyona ndlela yokunciphisa umyinge wenkunkuma engcolisa indalo esingqongileyo. Nangona ukuthengwa kwabathengi kwenze lo msebenzi waba nzima, abantu abaninzi bathatha isigqibo sokuphinda basebenzise ezinye izinto zamakhaya abo. Nangona uninzi lusenokubonakala lungenamsebenzi, kukho amaqhinga kunye neengcinga onokuzisebenzisa ukunqanda ukuba uzilahle kude.
Iingenelo zokuyila zokurisayikilisha ziyafana ngokusisiseko nezo zokwenziwa ngokutsha kwemveli: ukukhathalela indalo esingqongileyo, ukunciphisa ungcoliseko, ukunciphisa iigesi zegreenhouse, ukulondoloza ubutyebi bendalo kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ukuphuhlisa imikhwa yokusetyenziswa ngokufanelekileyo.
Nangona kunjalo, olu hlobo lokurisayikilisha lusinika ixabiso elongezelelweyo: lusinceda sikhuthaze ubuchule bokuyila kwaye lusenza ukuba sifune izisombululo zemihla ngemihla ngezinto, izinto kunye neemveliso esinazo.
Ayikokuhlela nje nokusebenzisa kwakhona, Olona ncedo luphambili lobuchule bokurisayikilisha kukwazi ukuthatha into esele sinayo kwaye siyinike umjikelo wesibini okanye owesithathu wobomi, ngaloo ndlela iququzelela iipateni zosetyenziso olunoxanduva.
Eyona ndlela ibalaseleyo yokuchitha ixesha ongalibalekiyo kunye nosapho lwakho kwaye unike ubomi kwiimveliso ongasazisebenzisiyo kungokuhlaziya kwakhona. Ukongeza kwiingcamango esikunika zona kule post, unokujonga kwakhona isikhokelo sethu se-DIY apho unokufumana imizekelo yendlela yokwenza ubugcisa obumangalisayo.
Ibhotile yeplastiki njengembiza yeentyatyambo
Ukuba ucinga ngokudala igadi yasezidolophini, unokuphepha ukuthenga iimbiza kwaye ube negalelo ekusebenziseni uxanduva ngokusebenzisa iibhotile zeplastiki ezingenanto. Nge-cutter unokuzisika zibe zisiqingatha, wenze umncinci omncinci ezantsi ukukhupha amanzi, kwaye uwagcwalise ngomhlaba ukuze ukwazi ukutyala ngokuthanda kwakho. Kwakhona, igadi yasezidolophini yindlela efanelekileyo yokukhulisa ukutya kwakho kwaye uqale umsebenzi ongayi kunceda nje indawo engqongileyo, kodwa kunye nengqondo nomzimba.
Isikhongozeli sepasta kunye nemifuno
Le ngcamango ikuvumela ukuba ugcine indawo kwaye ugcine ezi mveliso zintsha ixesha elide. njenge? Sebenzisa iibhotile zeplastiki, njengeziselo ezithambileyo, kwaye wazise irayisi, i-chickpeas okanye ipasta ukuzigcina zikhona.. Ngepeyinti esekwe emanzini, unokuzihombisa ngaphandle ukuze wenze umsebenzi othe kratya wobuchule kwaye uzichonge ngeziphawuli ezisisigxina ukuze wazi ukuba ziphi na.
Le yindlela yakudala yokuphinda isetyenziswe kweebhotile zeglasi. Unokuzipeyinta kwii-vases ezintle kwaye uhombise indlu yakho ngendlela yokuqala.
Ikomityi yeglasi yeyogathi njengesiphatho sekhandlela
Umsebenzi omnye wezi glasi unokusetyenziswa njengezinto eziphambili. Kufuneka nje uhlambe kwaye ubeke ikhandlela kubo ukuze ukukhanya kubonakaliswe kulo lonke igumbi.
Sebenzisa kwakhona ibhaluni ethotyiweyo
Iibhola ezihlanjululweyo zihlala zibekwe ezikoneni ngenxa yokuba azisasebenzi injongo yazo. Nangona kunjalo, ngenxa yezinto ezenziwe ngazo, Zingasetyenziselwa ukwenza iingxowa zezemidlalo ezimnandi.
Isacholo seBhotile yePlastiki
Sikunika umbono ukuze ungawalahli amanzi asebhotileni okanye iziselo ezibandayo. Yinqumle ibe ngamaqhekeza kwaye uwafake ngemicu yelaphu ukwenza izacholo ezintle.
Isibane ngecephe leplastiki
Amacephe alahlwayo ashiywe kwiiholide angaphinda asetyenziswe njengezibane zezibane, anqumle isiqingatha esisezantsi, sebenzisa iglue ebhityileyo kwaye uncamathisele ngokwendlela igubu okanye ibhotile yamanzi.
Umququzeleli ngeetyhubhu zekhadibhodi
Iityhubhu zamaphepha ekhadibhodi kunye nezinye iimveliso ezifanayo zingasetyenziselwa ukwenza abaququzeleli bekhebula. Zingasetyenziselwa ukulungelelanisa izimonyo, iipensile kunye nokunye. Beka ezininzi kwibhokisi yekhadibhodi kwaye usebenzise nganye njengesahluli kwizinto ezixeliweyo. Kulula ukwenza.
isakhelo sefoto ngejagi
Ibandakanya ukubeka iifoto kwiingqayi zeglasi. Emva koko, kuya kufuneka ugcwalise ngeoli eninzi.
Isilwanyana esinesoda cap
Ngenxa yobume bazo, iikepusi zesoda zilungele ukwenza ubugcisa nabantwana. Umzekelo, ngokuzincamathelisa kwikhadibhodi, unokwenza izilwanyana ezincinci ezithandekayo zokuhombisa. Enye inketho enkulu kukuzincamathela kumnyango okanye kwifriji enemagnethi. Uya kuba nolonwabo olulula nolonwabisayo.
Abathandi beencwadi badla ngokuqokelela iincwadi abasenokungaze baphinde bazisebenzise. Kunokuba sizilahle kude, sinokuzihlaziya size senze le shelufu intle. Ngele ndlela, sidala iziphumo ezibonakalayo ezimangalisayo. Imbeko kuncwadi lokuqala oluya kushiya wonke umntu osindwendwelayo engathethi.
Ikhandlela lokuhombisa elinesivalo
Iimbombo ezivela kwiintlobo ezithile zeziphuzo ziyakwazi ukuguqulwa zibe ngamakhandlela amancinci okuhlobisa kwigumbi lokuhlala okanye kwigumbi lokulala. Ukongeza, zilula kakhulu ukwenza. bazalise ngewax; faka intambo encinci kuzo kwaye uziyeke ziphumle. Nangona kunjalo, hlala ulumkile ukuba abanakutshisa nantoni na ebangqongileyo.
IHanger enezixhobo ezindala
Ezi zixhobo ziya kuhlala zisinceda kwimisebenzi ethile ekhaya. Nangona kunjalo, ezinye zindala kangangokuba siye sazitshintsha ngobugcisa obungakumbi. Ukunqanda ukuwachitha, wasonge kwaye uwancamathele kwindawo eyenziwe ngomthi ukuze ufumane ii-hangers. Ngale ndlela, uya kufezekisa umhlobiso oluncedo kunye ne-rustic.
Isibane esinebhalbhu endala
Ndiyabulela kwiglasi yayo entle, ibhalbhu inochuku oluhle kakhulu kwaye ifanelekile ukuhombisa. Ukuqala, ukuba unamadala, uwakhuphe phezulu, uwagcwalise ngeoli okanye amanzi, kwaye ubeke i-wick kuwo.
Iibhokisi zobucwebe ezineebhotile zeplastiki
Imilo yeentyatyambo emazantsi eebhotile ezininzi zeplastiki ingasetyenziselwa ukwenza iibhokisi ezintle zobucwebe bezacholo ezininzi.
Ndiyathemba ukuba ngezi ngcinga zokusebenzisa kwakhona ungafaka isandla sakho sesanti kulondolozo kunye nokhathalelo lokusingqongileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Yendalo » Ukusetyenziswa kwakhona » Izimvo zokurisayikilisha